Tag: toro-hevitra momba ny profil LinkedIn | Martech Zone
Tag: toro-hevitra momba ny profil LinkedIn
Talata, Febroary 9, 2021 Talata, Febroary 9, 2021 Douglas Karr
Misy korontana iray taonina izao eo amin'ny sehatry ny orinasa. Izaho manokana dia nahita orinasa kely marobe namoaka loharanom-barotra nandritra ny areti-mandringana sy ny fanidiana mifandraika amin'izany. Mandritra izany fotoana izany, eo am-pijerena ireo orinasam-pandraharahana miady mafy hahita talenta sy fahaizana efa za-draharaha aho. Izaho dia nanoro hevitra olona maro tamin'ny indostria mba hamindra ny fifantohan'ireo mombamomba azy ireo LinkedIn sy ny zavatra niainany tamin'ny orinasa lehibe kokoa. Amin'ny korontana ara-toekarena rehetra, ireo orinasa manana paosy lalina